Shirkadaha reer galbeeku kama soo wada bixin Ruushka
Tiro sii yaraanaysa oo shirkadaha reer galbeedka ah ee la yaqaanno ayaa wali ka sii shaqeeya dalka Ruushka, xitaa iyadoo oo boqolaal shikradood ay shaaca ka rogeen qorshahooda in dalkaas ay xiriirka u jarayaan.
Mukhaayadaha Burger King, iyo shirkadaha kale ee Eli Lilly iyo PepsiCo ayaa wali ka sii shaqeynaya dalkaas.
Xawligii ganacsiyada ka soo baxaya Ruushka ayaa sii xoogeystay labadii toddobaad ee la soo dhaafay, markii dagaalka iyo xalaadaha ban’iaadaminimo ay xumaadeen dalka Ukraine, markaas oo dalalka reer Galbeedku ay cunaqabateyno xoog badan saareen si Ruushka loogu ciqaabo dagaalka labo-toddobaad jirsaday ee uu Ukraine ku qaaday. Shirkadaha waaweyn ee saliidda ee BP iyo Shell ayaa joojiyey maal-galin malaayiin dollar gaareysa. McDoland’s iyo Starbucks ayaa iyaguna joojiyey inay macaamiisha u adeegaan.
Hase yeeshee, shirkadaha wali kusii horay Ruushka ayaa sheegay in ay jiraan furuuc dad Ruush ahi ay leeyihiin ama ay tix galinayaan shaqaalahooda. Waxay sheegeen in aanay dooneynin in dadka Ruushka ah ay ciqaabaan, iyaga oo ka qaadanaya cuntada iyo daawada. Kuwo kale ayaa sheegay in shirkadaha reer galbeedka ay siiyaan qalabka kumbiyuutarka iyo adeegyo maaliyadeed oo si fudud cid qabata aan loo heleynin.